आमाको क्रेडिट कार्डबाट ३० हजार पाउण्ड चोरेर उद्यममा लगानी::Nepali News Portal from Nepal
आमाको क्रेडिट कार्डबाट ३० हजार पाउण्ड चोरेर उद्यममा लगानी
एन्ड्र्यु माइकेल प्रविधि उद्यमीको व्यवसायिक यात्रा निकै रोचक छ। १७ वर्षको किशोरावस्थामा उनले आमाको क्रेडिट कार्डबाट ३० हजार पाउण्ड चोरे। सुन्दा अचम्म लागे पनि त्योसँगै उनको उद्यम यात्रा सुरू हुन्छ। उमेरगत परिक्वता नभएको त्यो समयमा उनले जुवा खेलेझै लगानी गरेका थिए। प्रविधि उद्योगमा खेलेको त्यो ‘जुवा’उनले जिते। पछिल्लो समय उनी लाखौँ पाउण्ड आर्जन गर्ने प्रविधि उद्यमीका रुपमा परिचित छन्।
यस्तो छ माइकेलको बिजनेस कथा :
सन् १९९७ मा माइकेल पश्चिम बेलायतको चेल्टेनहाममा आफ्नो आमासँग बस्थे। सोही बखत उनले एउटा व्यावसायिक अवसर देखे। त्यसलाई यतिकै खेर जान दिन उनको मनले नै मानेन। स्कुल साथीसँग मिलेर आफ्नै वेबसाइट चलाउने इच्छाले पिरोलेका माइकेलले त्यतिबेला थाहा पाए कि कमै मात्र ठूला वेब होस्टिङ्ग कम्पनीहरु साना व्यवसायप्रति लक्षित छन्।
‘त्यो समयमा बेलायतमा रहेका सबैजसो वेबहोष्टिङ कम्पनीहरुले ठूला कम्पनीहरुलाई टार्गेट गरिरहेका थिए’, हाल ३९ वर्ष लागेका प्रविधि उद्यमी माइकेल भन्छन्, ‘तर हामीले साना र विशिष्ट खालका व्यवसाय देख्यौँ जो सेल्फ सर्भिस र सजिलोसँग प्रयोग हुने केही कुरा चाहन्थे।’सोही कारण माइकेल र उनका साथीहरुले ठूला र साना व्यवसायको बजारभित्र देखिएको खाली ठाउँ पूरा गर्ने निर्णय गरे। यसका लागि उनीहरुले ‘फास्टहोस्ट्स’ नामको वेब होस्टिङ कम्पनी खोले। घरमा माइकेलको बेडरुममा केही थान कम्प्युटरहरु थिए। त्यसकै प्रयोग गरी माइकेलले साथीहरुसँग मिलेर आफैँले सफ्टवेयर निर्माण गरे।
सफ्टवेयर त निर्माण भयो तर त्यसका लागि उच्च र तीव्र गतिको इन्टरनेट चाहिन्थ्यो। जुन यतिकै उपलब्ध हुँदैनथ्यो। ३० हजार पाउण्ड आवश्यक पर्ने भयो तर माइकेलसँग त्यति पैसा नै थिएन।
केही विकल्प भेटिएन। त्यसपछि उनले आमाको क्रेडिटकार्डबाट पैसा चोर्ने निर्णय गरे। सोही बमोजिम माइकेलले इन्टरनेट अपग्रेड गरे। त्यसपछि सुरु भयो उनको व्यवसाय।
माइकेलको टिमले केही म्यागजिनहरुको विज्ञापन बुकिङ गर्‍यो। यो उनको बिजनेस जुवाको पहिलो सुरुवात थियो। तर क्रेडिट कार्डबाट चोरेको आमाको पैसा पनि घरमा बिल आउनुअघि नै जम्मा गर्ने योजना माइकेलले बनाएका थिए। यसका लागि उनले पहिलो महिनामै क्रेडिटकार्डको चोरेको ‘उधारो’ तिर्न सकिने विश्वास लिएका थिए। समय र परिस्थिति माइकेलले सोचेअनुरुप नै भयो। निकै अचम्म भयो।
आश्चर्यजनक रुपमा माइकेलको योजनाले काम गर्‍यो। उनी भन्छन्, ‘महिनाको अन्तिम दिनसम्ममा हामीसँग धेरै ग्राहक जोडिन आइपुगे। पैसा पनि जम्मा भयो।’ त्योभन्दा नि अर्को महत्वपूर्ण कुरा त उनलाई पैसा चोरे पनि आमाले माफी गरिदिइन्।
साथीहरु विश्वविद्यालयमा पढ्नतिर लागेपछि माइकेलले आफ्नै योजना रद्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। तर उनले हिम्मत हारेनन्। बरु आफ्नो उच्च शिक्षालाई थाती राख्ने विचार गरी फास्टहोस्ट्सर्क सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनमा उनले दिलोज्यान लगाए।
सुरु गरेको ९ वर्षपछि उनले यो कम्पनी ६१.५ मिलियन पाउण्ड अर्थात् झण्डै नेपाली सवा ९ अर्ब रुपैयाँमा बेचे। त्यतिबेला उनी २६ वर्षका पुगेका थिए। कम्पनीमा ७५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व बाँकी रह्यो। यसले उनको खल्तीमा ४६ मिलियन पाउण्ड अर्थात् झण्डै ६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हात पर्‍यो। त्यसको २ वर्षपछि उनले फेरि लाइभड्राइभ नामको क्लाउडड स्टोरेज फर्म खडा गरे। जसलाई उनले १०औँ लाख पाउण्ड मूल्यमा बेचे। आफ्ना दुवै बिजनेसले सफलताको उचाइ लिएपछि माइकेल पत्रपत्रिकाका हेडलाइनमा पनि पर्न थाले।
साइप्रसमा जन्मिए, चेल्टेनहाममा हुर्किए
सफल प्रविधि उद्यमी बनेका माइकेलको जन्म भने साइप्रसमा भएको थियो तर उनी हुर्किएका थिए बेलायतको चेल्टेनहाममा। व्यावसायिक अभिप्रेरणा बुबाबाट लिएको बताउने माइकेल भन्छन्, ‘मेरो बुबा साइप्रसबाट आउनुभएको थियो, उहाँ एक लघु उद्यमी हुनुहुन्थ्यो।’ माइकेल आफ्ना बुबाले माछामासु र चिप पसल सुरु गरेको बताउँछन्। सोही बखत माइकेल बाल्यावस्थामा नै ड्राइभिङमा रमाउँथे, सँगसँगै उनी व्यावसायिक ‘आइडियाज’ र बुबाको व्यवसायबाट आर्जन हुने पैसा संकलन गर्ने गर्थे। ‘सानै उमेरदेखि नै म व्यापार, पैसा कमाउनेबारे मनमस्तिष्कदेखि नै सोच्ने गर्थेँ’, उनी भन्छन्।
कसरी फस्टायो पहिलो कम्पनी ?
यो प्रश्नमा माइकेल भन्छन्, ‘म त्यतिबेला लेजर फोकस्ड भई आफ्नो बिजनेसमा सक्रिय थिएँ ।’ २००६ मा आफ्नो बिजनेस बिक्री भएपछि माइकेल धनी त भए तर आफूलाई केही कुरा अझै गर्न बाँकी रहेको जस्तो सोच आयो।
आफ्नो अफिसमा रहँदा र आफ्नो बैंक अकाउन्टबाट पैसा आउँदा यसले निकै खुसी थप्ने उनको आशा थियो तर जब अफिस बिक्री भयो त्यो सबै गलत सोचाइ रहेको उनले महसुस गरे।
अफिस नहुँदा निकै असहज भएको उनको भनाइ छ। त्यसको २ वर्षपछि नै उनले लाइभड्राइभ बिजनेस सुरु गरे। बजारै बजारको भीडमा उनको दोस्रो कम्पनीले निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो।
‘हामीले धेरैभन्दा धेरै त्यस्ता मानिस र आइडियाहरु पायौँ, जो हामीजस्तै र हाम्रो सोचसँग मेल खाने प्रकृतिका थिए तर सोच्नु र काम गर्नु फरक थियो’, उनी भन्छन्, ‘यो नै मेरो पहिलो सम्भावित असफलताको अनुभव जस्तो थियो।’
तर पुनः उनले आफैँजस्तो सहयोगी साथी भेटे। ती व्यक्ति इलेक्ट्रोनिक रिटेलर डिक्सनसँग सम्बन्धित थिए। एक रात भएको ती व्यक्तिसँगको भेटले पुनः उनी काममै फर्किए। त्यसपछि डिक्सनले लाइभड्राइभलाई मद्दत गर्नथाल्यो। डिक्सनको मद्दतपछि माइकेलको बिजनेस फास्टहोस्ट्सभन्दा ठूलो हुनपुग्यो। फस्टायो।
त्यसपछि सन् २०१४ मा लाइभड्राइभको बिक्री भयो। माइकेलको पछिल्लो बिजनेस बार्क डटकम (बीएआरके डटकम) हो, जसले मानिसलाई आवश्यक पर्ने व्यावसायिक काम र सहयोगमा साथ दिन्छ। टिचरदेखि प्लम्बरसम्म यसले मानिसलाई उपलब्ध गराउँछ।
माइकेलको सफलताबारे के भन्छन् अरु ?
एक स्वतन्त्र प्रविधि विश्लेषक माइकेलको फास्टहोस्ट्सलाई कम्प्युटर प्रविधिमा फस्टाएको राम्रो बिजनेस मान्छन्। जुन ८० र ९० को दशकमा बेलायतमा निकै राम्रो प्रभाव छोड्न सफल भयो। यो केवल १७ वर्षे माइकेलको सफलता मात्र नभई धेरैलाई वेब होस्टिङमा पहुँच दिन र डोमेन रजिष्टर गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न सफल भएको स्वतन्त्र विश्लेषकहरु बताउँछन्। त्यस्तै, लाइभड्राइभ भने व्यक्तिगत र साना उद्यमलाई स्थापित गर्ने र ब्याकअप मार्केटको पायोनिअर नै रहेको मानिन्छ। आफ्नो व्यवसायिक जीवन यहाँसम्म आइपुगे पनि माइकेलसँग अझै धेरै महत्वाकांक्षाहरु छन्। ‘म त्यस्तो खालको मान्छे हुँ, जोसँग जति धेरै छ, अझै धेरै चाहन्छ। यद्यपि मेरा दुई बिजनेस सफल भए, तर म यसलाई त्यस्तै धेरै सफल भने मान्दिनँ।’ (बीबीसीबाट अनुवाद)